Barcelona Oo Isaga Hartay Baacsiga David Alaba – Real Madrid Miyey U Seegeen? – Garsoore Sports
Barcelona Oo Isaga…
Barcelona ayaa ka dhawaajisay suurtagalnimada ay kula soo saxiixan karto daafaca kooxda Bayern Munich David Alaba laakiin waxay ogaatay in cayaaryahankan ay ka go’an tahay inuu si xor ah xagaagan ugu biiro Real Madrid, ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya.
Alaba, oo 28 jir ah, ayaa qandaraaskiisu dhacayaa bisha June wuxuuna u sheegay Bayern Munich horraantii xilli-ciyaareedkan inuu doonayo inuu soo gabagabeeyo 13 sano oo uu la joogay kooxda.
Barca ayaa ku dhow inay dhammeystirto saxiixa ciyaaryahanka Manchester City Eric Garcia, kaasoo qandaraaskiisa uu sidoo kale dhacayo xagaagan, laakiin tababare Ronald Koeman ayaa sidoo kale taageeri lahaa imaatinka daafac khibrad badan leh sida Alaba si uu cadaadiska uga yareeyo Gerard Pique.
Madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta ayaa loo sheegay inuu ka faa’iideysto xiriirka uu la leeyahay wakiilka Alaba, Pini Zahavi, si uu ugu riixo inuu iyaga u saxeexo balse si dhakhso ah ayuu u tuuray isku-dayadaasi markii uu ogaaday in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria uu horrey heshiis hoose ula galay Madrid.
Xaaladda dhaqaale ee Barca ayaa la micno ahayd inay awoodi kari weyday inay bixiso lacagta ay bixinayso Madrid.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale u sheegay ESPN in David Alaba uu xiriir wanaagsan la leeyahay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Toni Kroos, oo ay iskala soo cayaarayeen Bayern, xiriirkaasna uu ka caawiyay inuu isku weeciyo dhanka Madrid
Xiisaha Madrid ee Alaba ayaa ka horeysay doorashadii Laporta oo noqday madaxweynaha Barca bishii Maarso. Bishii Febraayo, ilo wareedyo ayaa u sheegay ESPN in kooxda heysata La Liga ay hoggaamineysay baacsiga ciyaaryahankan, inkastoo ay xiiseynayeen kooxaha Premier League ee Chelsea iyo Liverpool.
Saxiixa Alaba ayaa laga yaabaa inuu shaki dheeraad ah ka muujiyo mustaqbalka labada daafac ee Zinedine Zidane, Sergio Ramos iyo Raphael Varane.
Kabtanka kooxda ee Sergio Ramos ayaa qandaraaskiisa uu dhacayaa xagaagan walina ma uusan ogolaanin in heshiiska loo kordhiyo, halka heshiiska Varane uu dhacayo 2022, Madrid ayaana lagu qasbi karaa inay Sergio Ramos iska iibiso dhammaadka xilli ciyaareedkan si looga fogaado halista ah inuu si bilaash ah uga baxo.
Bishii Febraayo, ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sidoo kale sheegay in Manchester United ay isha ku heyso xaalada Varane oo uu diiday inuu meesha ka saaro wax walba oo dhici kara mar uu ka hadlayey shir jaraa’id kahor kulankii semi-finalka Champions League ee Talaadadii ay wajaheen kooxda Chelsea.